Semalt: Mozenda Data Extractor - Yakanakisisa uye Yakagadzirika Chishandiso
Mozenda inobatanidza web scraping service; iyo inonyatsozivikanwa nokuda kwezvinhu zvayo zvinobatsira uye kukwanisa kuita mabasa akawanda panguva. Iyi software inokubvumira kuparadzira zvinyorwa kubva paAliexpress. com, Boohoo. com, Amazon, uye eBay. Iwe unogona kuchengeta mafaira kuDropbox neGoogle Drive, kana kuti kuikanda iyo zvakananga kuDisk disk yako.
Mozenda anobata sei?
Mozenda anoita mabasa ayo maererano nemuenzaniso unotevera:
1 - human resource solutions incorporated. Inotora data kubva kune dzimwe nzvimbo. Chokutanga, Mozenda inotsanangura nhamba dzematafura.
2. Mutsara inotevera, inosanganisira datasets.
3. Chechitatu, Mozenda inobhadhara migumisiro kune mbiri mbiri yegore storage storage services: Dropbox neAWS.
Mozenda Web Console uye Muvaki Wemagariro
1. Mozenda Web Console - Kushanda kwewebhu iyi kunotibvumira kuti tishandise vatenzi vedu (mapurojekiti epamusoro). Tinogonawo kuona uye kuronga zvigumisiro uye kutumira zvinyorwa zvakabudiswa ku CSV neJSON.
2. Mugadziri Wemagetsi - Ndiyo yeWindows application inoshandiswa pakuvaka mapurojekiti akawanda ekubudiswa kwemashoko panguva imwe chete.
Zvikamu zvakasiyana-siyana zveMozenda:
1. Zvose-in-one software:
Mozenda inonyatsozivikanwa nokuda kwekushandiswa kwayo kwevashandi. Haisi yekutora webhutori chete asiwo mucheka; iyi software inoshandisa mabhodhi akasiyana-siyana kuti inyore mapeji ako ewebhu. Iyo inogona kubvisa deta kubva kumawebheni akavharidzirwa, uye iwe unongoda kujekesa URL kuti uite yakarohwa pakarepo. Kunyanya, inopa spam kuchengetedza uye kugadzirisa zvikanganiso zviduku pane zvaunenge uine.
2. Zvinokodzera mabhizinesi maduku:
Sekutanga, zvingave zvisingabviri kuti iwe uwane mari inotengeswa data scrapers kana kuti web crawlers. Zvisinei, Mozenda ndiyo software yekusununguka inogona kuita mabasa anotyisa zvikuru nyore. Iyo inoongorora magwaro ewebhu, inounganidza ruzivo pamusoro pevakwikwidzana, maitiro azvino, magetsi anobuda, uye inoita kuti iwe unhuke mhinduro munyaya yemaminitsi. Mozenda yakanaka kune vashandi vemabhizimisi uye mabhizimisi maduku uye hazvidi kuti iwe uve nekodhi yekodhi kana kuti chirongwa.
3. Nyora webusaiti yose:
Kana uri kutarisa kuti udzikise webusaiti yose, Mozenda ndiyo nzira yakarurama kwauri. Vatsvakurudzi vanoda kuwana ruzivo kubva kumagazini uye e-mabhuku kuti vaite zvayakaedza. Ichi chishandiso chinobatsira kuunganidza dhigirii uye kuwandisa dambudziko nenzira iri nani, uye makambani anogona kushandisa Mozenda kutanga uye kutengesa michina yakasiyana.
4. Zvakanaka kuti mutambo uzivikanwe:
Kana iwe watanga marati kana kuti unoda kukurudzira zvinhu zvako uye mazano paIndaneti, unofanira kushandisa Mozenda. Neyi data scraping yesebasa, unogona kuunganidza nyore nyore data, ita zvidzidzo zvakawanda uye kuongorora huwandu hwemagwaro ako. Uyezve, chigadzirwa ichi chinobatsira kuunza hutungamiri huzhinji uye kukurudzira mararamiro ako kumagariro ehupfumi nekubudirira. Muchidimbu, unogona kukura bhizimusi rako uchishandisa iyi software uye inogona kutarisa vangave vatengi munyika yose.